Toetr'andro any Sri Lanka " Journey-Assist - Weather in Sri Lanka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Toetany ao Sri Lanka
Toetr'andro sy toetr'andro any Sri Lanka (Ceylon)
Pejy natokana ho an'ny faritra, tanàna sy trano fandraisam-bahiny Sri lanka, ny endri-javatra amin'ny vanim-potoana climatic dia mihatra manokana amin'izy ireo, ary amin'ity pejy ity isika dia miresaka momba ny olan'ny toetr'andro ankapobeny ao Sri Lanka.
Sarintany Weather Interactive
Toetany ao Sri Lanka
Salanisan'ny rano sy ny mari-pana isan-taona
Mampiavaka ny vanim-potoana i Sri Lanka
Orana any sri lanka
Sari-tany Map any Sri Lanka (Interactive)
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia afaka mahita ny toetr'andro any Sri Lanka izao. Ity ambany ity ny fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Ao amin'ny zoro havanana ambony dia misy bokotra iray hidirana amin'ny menio widget izay ahafahanao misafidy karazana fampahalalana tianao haseho ilay widget. (rivotra, oram-baratra, orana, rahona, onja, tsindry avy amin'ny atmosfera, onja, vovoka, haavon'ny CO2 ary zavatra ilaina hafa).
Any amin'ny faritra avaratra sy atsinanana amin'ity firenena nosy ity, ny toetrandro dia an'ny karazana subequatorial, ary any amin'ny faritra atsimo sy andrefana dia mitovitovy.
Amin'ny ankapobeny, ny toetrandro mafana sy mando dia manjaka any Sri Lanka. Mandritra ny taona, ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana dia tsy mihoatra ny 5 degre. Ny toerana mangatsiaka indrindra eto amin'ny nosy dia Nuwara Eliya, izay isiterman'ny antoandro dia +16, ary ny isotherm amin'ny alina dia +10. Eo amoron'ny nosy, ny isotherm isan'andro dia +30. Ny isotherm an'ny rano amoron-dranomasina amin'ny Ranomasimbe Indianina ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny dia manomboka amin'ny + 28 ... + 30. Any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny morontsiraka, ny fotoana mety indrindra amin'ny filomanosana sy fivezivezena dia ny volana desambra-aprily, any amin'ny faritra avaratra atsinanana dia hatramin'ny martsa ka hatramin'ny novambra.
Na eo aza ny halehiben'ny nosy dia miovaova be ny toetrandro amin'ny faritra samihafa any Sri Lanka. Ny anton'izany dia ny mampiavaka ny toerana ara-jeografika ao amin'ilay nosy, izay hita ao amin'ny faritra iray amin'ny toetr'andro monja ambanin'ny tany. Antony iray hafa ny fahasamihafana amin'ny toerana avo amin'ny toerana samihafa any Sri Lanka.
Any Sri Lanka dia misy zoro toetr'andro 3 lehibe: lemaka, morontsiraka ary faritra avo amin'ny faritra afovoany.
Ny morontsiraka sy ny lemaka dia miovaova indrindra amin'ny orana isan-taona, ary kely ny fihenan'ny mari-pana amin'ny mari-pana ao amin'ireo faritra roa ireo. Ny mari-pana ao amin'izy ireo dia mijanona eo amin'ny +28 amin'ny antoandro ary amin'ny +24 amin'ny alina. Saingy ny morontsiraka sy lemaka dia samy hafa be any afovoan-tendrombohitra any Sri Lanka amin'ny isotherms isam-bolana. Izany dia hita taratra amin'ny zava-misy fa amin'ny alina amin'ny ririnina amin'ny afovoan-firenena dia misy mari-pana somary ambany raha ampitahaina amin'ny firenena sisa fa misy ny frost sy ny hetaheta amin'ny zava-maniry.
Salanisan'ny rivotra sy rano ny mari-pana isan-taona
Noho ny maha-akaiky azy amin'ny ekoatera any Sri Lanka, dia malemy ny fizaran-taona. Samy hafa izy ireo indrindra amin'ny resaka orana. Ny tsy fitovian'ny hafanana ambony sy ambany indrindra mandritra ny herintaona dia tsy mihoatra ny 4 degre.
Ny isotherm isan-taona an'ny rano amoron-dranomasina dia eo amin'ny + 27 ... + 29. Ny rivotra isotherm any amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina mandritra ny andro dia + 28 ... + 32, ary amin'ny alina dia eo amin'ny + 24 ... + 26. Ao afovoan'ilay nosy dia ambany kokoa ny isotherm isan-taona: ny antoandro dia manomboka amin'ny +18 ka hatramin'ny 20, amin'ny alina - manomboka amin'ny +10 ka hatramin'ny 14.
Fahasamihafana ao amin'ny vanim-potoana amoron-tsiraka
Mandritra ny vanim-potoanan'ny orana dia matetika avy ny orana intelo ka hatramin'ny efatra isan'andro. Matetika koa izy ireo dia mitranga amin'ny alina. Misy oram-baratra sy onja ao amin'ny ranomasina ny orana. Ny filomanosana amin'ity vanim-potoana ity dia tsy ilaina, satria ny ranomasina dia manafika hatrany ary onja mahery mipoitra ao ambany rano. Na izany aza, ny milomano amin'ity vanim-potoana atsimon'i Sri Lanka ity, ohatra, ny volana Aogositra sy Oktobra (ireo volana ireo dia vanim-potoana mononta amin'ny faritra andrefan'ny morontsiraka), dia lavitra an'io zavatra io ihany. Ny volana aogositra dia miavaka amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, rehefa feno rano ny fasika amoron-dranomasina rehetra, maina mandritra ny volana sisa tavela, ary tonga any amin'ny felatanana amoron-tsiraka ny onja. Ary ny volana Oktobra dia miavaka amin'ny rano masiaka, izay azo atao ny milomano (miaraka am-pitandremana).
Mandritra ny alina, tsy misy orana raha tsy avy ny orana. Zava-tsy fahita io mandritra ny andro, ka ny orana tropikaly fohy fohy dia azo heverina ho tsara vintana, satria rehefa avy manjary mora kokoa ny mifoka rivotra io ary manjavona ny fahantrana. Amin'ny alina, ny vanin-taona tsara ihany no miseho amin'ny faran'ny fotoanan'ny orana, fa mandritra ny fotoana sisa misafotofoto ny ranomasina, ary miseho eny amin'ny lanitra ny tselatra, izay manazava ny hazavana tsy misy farany ary miaraka amina rivotra sy kotroka.
Amin'ny vanin-taona maina, mihamangatsiaka kokoa ny toetrandro noho ny rivotra iainana tonga any Sri Lanka mandritra ny volana ririnina. Fizahan-tany izao vanim-potoana izao. Amin'ny alina, ny morontsiraka dia manao hetsika an-tokotany ivelany.
Ny fotoana ilatsahan'ny orana be dia be eto amin'ity nosy ity dia antsoina hoe "vanim-potoana mononta" na "vanim-potoana orana". Voakasiky ny monsoons roa i Sri Lanka: ny iray avy any amin'ny Ranomasina Arabo, ny iray avy any amin'ny Bay of Bengal. Ny fizaran-toetrandro eto amin'ity nosy ity dia manana ny mampiavaka azy amin'ny faritra samihafa amin'ny morontsiraka sy amin'ny volana samihafa.
Noho izany, mandritra ny fiandohan'ny fotoanan'ny orana any amin'ny faritra andrefan'ny morontsiraka (faran'ny volana aprily - voalohan'ny volana mey) dia manomboka any amin'ny faritra atsinanan'ny morontsiraka ny fizahan-tany. Ary avy eo, rehefa manomboka ny faritra orana amin'ny ilany atsinanan'ny morontsiraka (Oktobra) dia manomboka amin'ny faritra andrefana ny main-tany.
Ny orana dia maharitra amin'ny fotoana samy hafa any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny nosy:
Morontsiraka avaratra-atsinanana: Oktobra-Mey.
Morontsiraka atsimo: Mey-Oktobra.
Kandy: Aprily-May sy Oktobra-Desambra.
Nuwara Eliya: Mey-Jolay sy Oktobra-Desambra.
Ny volana oktobra sy mey no volana manorana indrindra eto amin'ny nosy. Mampiavaka azy ireo ny rotsakorana be indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny morontsiraka sy amin'ireo faritra be tendrombohitra any Sri Lanka.
Ny orana mandritra io vanim-potoana io dia misy ny fisehoan'ny oram-be tropikaly ary matetika dia maharitra ela, hatramin'ny antsasak'adiny. Miaraka amin'ny isotherms isan-taona, ny mari-pana ao amin'ny morontsiraka mandritra ny vanim-potoana monsoon dia aseho amin'ny fahasamihafana kely amin'ny lanja andro aman'alina, izay 2-4 degre.